Ama-Metrics Amabili Amasha we-Ecommerce Okufanele Uwalandelele | Martech Zone
Ama-Metrics Amabili Amasha we-Ecommerce Okufanele Ulandele
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, i-2015 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 10, i-2015 UJim Sterne
Ukuthengiselana (ngokuya nge-Wikipedia kusuka ngoMashi 19 ngo-10: 18 ekuseni Isikhathi Sokukhanya Kwemini sasePacific) ngu:
Noma imuphi umkhuba onikela ekuthengisweni kwemikhiqizo kumthengi othengisa. Ezingeni lesitolo, ukuthengisa kubhekisa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemikhiqizo etholakalayo ukuthengiswa kanye nokukhonjiswa kwaleyo mikhiqizo ngendlela yokuthi ivuse inzalo futhi ihehe amakhasimende ukuthi athenge.
Indaba yokuqala (ye-apocrypha) yokuthengisa kanye nedatha iphathelene namanabukeni alahlwayo nobhiya. Izibalo zikhombise ukuthi abantu abathenga amanabukeni abalahlwayo ezitolo ezisezingeni elifanele, kunokuba bathathe uhambo oluhlelwe kahle oluya esitolo esikhulu samabhokisi, nabo - ngokuxhamazela - bathatha iphakethe lesithupha likabhiya.
Indima yomthengisi ukuthola isinqumo sokuthi ukubeka lezo zinto zombili ndawonye kungakhuphula ukuthengiswa kukabhiya, noma ukuthi ukuzihlukanisa ngokwenyama kungakhuphula ukuthengiswa kwezinye izinto, zomfutho. Umthengisi we-data-drive oyiqiniso ubezohlola womabili - ezindaweni ezihlukene - ezifundeni ezahlukahlukene zenhlalo nezomnotho - ngamanani entengo ahlukene.
Ukuthengiswa okusesitolo kwafinyelela inani eliphakeme ledatha lapho izindaba ziphuma eJapan zokuthi izitolo eziyi-7-Eleven ziyishintshe kanjani imikhiqizo ezinayo emashalofini abo ngokususelwa esikhathini sosuku ukukhulisa isikhala sabo esilinganiselwe sokuthengisa.
Abanye abakhiqizi banamandla athile lapho basebenza nezitolo ezinkulu. Ukushintshisana ngamamajini aphezulu, izindleko zokuthumela eziphansi, ukupakisha okukhethekile, njll. Uchungechunge lokuthengisa lunganikeza ukucatshangelwa kweshelufu ngokukhethekile kozakwethu abahamba phambili.
Kepha kwenzekani lapho ukuboniswa kwesitolo kungabonakali noma kwenziwa ngamandla kuya ngesitolo? Uyemukelwa ekuthengiseni oku-inthanethi.
Kuphi, Oh Iphi Imikhiqizo Yami?
Uma uthengisa nge-Amazon, i-BestBuy noma i-Costco, awazi noma ngabe imikhiqizo yakho iyavela ekhasini lasekhaya, esigabeni esinikeziwe noma ngesikhathi sokusesha esizeni ngaphandle kokuthi lezi zinto kuxoxiswane ngazo ngaphambili futhi zikwenzele inhlanhla lokho.
Yilapho amamethrikhi amasha Ukutholakala futhi Ukuthengwa Ngena.
Kwenziwe ngu Izibalo Zokuqukethwe:
Ukutholakala isilinganiso samandla omthengi wokuthola umkhiqizo ku-inthanethi.
Ukuthengwa kuthinta ikhono lekhasimende elingahle lenze isinqumo esinengqondo
Ingabe kukhona imininingwane eyanele mayelana nokucaciswa, usayizi, ukupakisha, intengo, njll., Ukuze bakubeke enqoleni yokuthenga?
Umsunguli we-Content Analytics uDavid Feinleib uthi ngaphezu kwama-75% okuseshwa esizeni kumasayithi amakhulu we-e-commerce afana neAmazon ne-Walmart.com ngamagama wosesho olujwayelekile kunokuba ngamagama ezimpawu. Wazi kanjani ukuthi umkhiqizo wakho uvela ekhasini lokuqala lemiphumela yasesitolo? Lokhu kubalulekile ngoba imikhiqizo esezikhundleni ezintathu eziphezulu ithokozela izikhathi ezine zomgwaqo kunayo yonke eminye imiphumela ehlanganisiwe. Lo magazini, kunjalo, ukhuliswa kakhulu ngokuthengwa kwamaselula.
Ngasohlangothini lokuthengwa, umthengisi oku-inthanethi udinga ukwazi ukuthi ngabe imininingwane efanele ihanjiswa ku-shopper ngefomethi efanele, ngesikhathi esifanele, ukuyenza ibe ngumthengi. Izithombe, ama-specs nokubuyekezwa kufanele kube khona ukuze kutholakale ukuthengiswa.
Njalo ngehora, ama-Content Analytics aqapha amasayithi okuthengisa afaka phakathi Amazon, Best Buy, Costco, CVS, Izidakamizwa.com, Iqembu likaSamu, Futhi Walmart ukubona ukuthi imikhiqizo yakho ivela kuphi futhi kanjani.
Into ithi ngaphandle kwesitokisi? Uthola isexwayiso.
Into ilahlekelwa isikhundla sayo emiphumeleni yokucinga? Uthola isexwayiso.
Oncintisana naye kushintsha amanani abo kumthengisi othile? Uthola isexwayiso.
Inombolo enganele ye- ukubuyekezwa komkhiqizo? Uthola isexwayiso.
Ukubukeka okungalungile kuvuliwe Amadivayisi eselula? Uthola isexwayiso.
Isithombe enganikeli njengoba bekulindelekile? Uthola isexwayiso.
Yize ubuchwepheshe uqobo bungeke buvelele, ukuqoqwa nokuhlaziywa kwezinhlobo ezifanele zedatha kukhombisa ukuthi kuyigugu elikhulu emhlabeni oku-inthanethi.
Uma usezweni le-ecommerce, sekuyisikhathi sokungeza ukutholakala nokuthengeka ku-lexicon yakho yamamethrikhi.
Tags: ezokuhweba ngekhompyuthaamamethrikhi we-ecommerceukutholakalaukuthengwa
UJim Sterne ungumxhumanisi wamazwe omhlaba ogxile ekulinganiseni inani lokwakha nokuqinisa ubudlelwano bamakhasimende. USterne ubhale izincwadi eziyisishiyagalombili ngokukhangisa okusebenzisanayo, unguMongameli Owasungula kanye noSihlalo wamanje we Inhlangano ye-Digital Analytics futhi ikhiqize i- Ingqungquthela yeMetrics futhi Ingqungquthela Yezindaba Zabezindaba.
Ama-MockupsJar: Ama-Stock Mockups weSelula neDeskithophu
Gcina Lokhu Kusebenza: Imithetho Emisha eyi-10 Yezokuxhumana Ngezinkinga